unusual Archives | Page 21 of 22 | XYZ NEWS
July 16, 2019 - by Editor a
လူ အတော်များများက အမေရိကန် ဒေါ်လာ၊ ဆွစ်ဖရန်၊ ဗြိတိသျှပေါင်၊ ယူရိုငွေကြေး စသဖြင့် တန်ဖိုးမြင့်မားပြီး ခိုင်မာတဲ့ ငွေကြေးစနစ်တွေကို သိကြပါတယ်။ အဲဒီငွေကြေးစနစ်တွေက သူတို့ကို ထုတ်လုပ်သုံးစွဲတဲ့ နိုင်ငံတွေကဲ့သို့ပဲ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှုလောကမှာ သြဇာအာဏာ ရှိကြတဲ့ ငွေကြေးစနစ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးရှိပြီး အခိုင်မာဆုံးသော ငွေကြေးစနစ်တွေ နည်းတူ တန်ဖိုးအနည်းဆုံး ငွေကြေးစနစ်တွေလည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် …
ကိုယ်ချင်းဆက် အမွှာတွေရဲ့ လိင်မှုရေးရာအခြေအနေဘယ်လိုရှိမယ်လိုု့ သင်ထင်သလဲ …?
အင်း…သင်ခေါင်းထဲမှာရော ဒီလိုမျိုးတွေတွေးမိမလားမသိ…. ။အမွှာ တွေဟာ တူညီတဲ့အရာအများကြီးရှိတဲ့အကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့သိထားတာပဲ ။တစ်ယောက်ခံစားရတဲ့အတိုင်းနောက်တစ်ယောက်က ခံစားရတယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း သာမန် အမွှာနှစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲတူနေပါစေ သူတို့မှာ သူတို့နဲ့ပတ်သတ်တဲ့သီးခြားအရာတွေရှိတာပေါ့ ။ ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာတွေကျတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ အမြဲတမ်းအတူတူဖြစ်နေတဲ့အတွက် သီးခြားအရာတွေရှိဖို့ဆိုတာကသိပ်မဖြစ်နိုင်ဘူး ။ ဒီမှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိလာတာက သူတို့ လိင်ကိစ္စ ကိုရောဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ ။ သူတို့ရဲ့လက်တွဲဖော်တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုး ဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ကြလဲ ။ ကိုယ်ချင်းဆက် …
စစ်တမ်းတွေအရ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချောဆုံး ၊ အလှဆုံး အမျိုးသမီး များရှိတဲ့ နိုင်ငံ ( ၆ ) နိုင်ငံ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လှပတဲ့လူတွေကိုအမြဲတမ်းတွေ့ရှိရပါတယ်။တစ်ချို့နိုင်ငံတွေကတော့ သူတို့ရဲဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နေထိုင်သူတွေကြောင့်ကျော်ကြားပါတယ်။အလှပဆုံး အမျိုးသမီး များရှိတဲ့ နိုင်ငံ၆နိုင်ငံကို အောက်မှာကြည့်လိုက်ရအောင်။ 6. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု (U.S) U.S နိုင်ငံ ဟာဆိုရင် ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံတွေ ‎လူမျိုး ဘာသာရေး တွေရောနှောနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တာကြောင့် U.S နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလှပဆုံးအမျိုးသမီးတွေရဲ့ နေထိုင်ရာအိမ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ အမေရိကန်လူမျိုးတွေရဲ့အလှအပပုံစံတွေကအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတာကြောင့် အမေရိကန် စတိုင် ဆိုတာကိုတိတိကျကျဖော်ပြနိုင်ဖို့က ခက်ခဲပါတယ်။ အဲ့လိုမျိုးမတူညီကွဲပါးမှုတွေကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလှအပများနှင့်ပြည့်နှက်နေတဲ့ …
သင့်ကြောင်လေးကသင့်ကုုိ ချစ်တယ်လို ့ပြောနေတဲ့အမူအရာများ
ကြောင်တကောင်မရှိတဲ့ဘဝကပျော်ဖို့မကောင်းပါဘူး။သင်အိမ်ပြနိတဲ့အခါဘယ်လိုဆန့်ကျင်လဲဒါမှမဟုတ်တခြားအကောင်လေးတကောင်ဖမ်းပြရင်းနဲ့သင့်ကိုပျော်စေတဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။သူတို့ကသင့်ရဲ့အိမ်မွေးအကောင်လေးဆိုတာထက်ပိုပြီးမိသားစုလိုမျိုးပာပဲ။ပြီးတော့သင်ပွတ်ပေးနေတဲ့လက်ကိုဖယ်ပြီးရုတ်တရတ်သူတို့ကိုက်ရင်မစိုးရိမ်ပါနဲ့။သူတို့မရူးပါဘူး။သူတို့အရမ်းချစ်တာပဲနေမှာပါ။ BrightSideကသင့်ကြောင်လေးကသင့်ကိုချစ်ကြောင်းနားလည်ဖို့ကူညီချင်ပါတယ်။သင်ကလဲသူတို့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ဗိုက်ကိုကုတ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့။ ၁။သင့်နှုတ်ခမ်းတွေကိုကြောင်ကရုတ်တရတ်ထိမိတယ်လို့မထင်ပါနဲ့။သူတို့ရဲ့အချစ်ကိုပြဖို့ရည်ရွယ်တာပါ။ ၂။သူတို့ခေါင်းနဲ့သင့်ကိုပွတ်တာကရန်ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ၃။သင့်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မျက်လုံးပွတ်တာကသင်ကအရမ်းကောင်းတယ်ထင်လို့ပါ။ ၄။သင့်ကြောင်တွေကသင့်ကိုချစ်လို့အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲချစ်ကြောင်းပြတာပါ။ ၅။ကြောင်တွေကသူတို့နောက်လိုက်ခဲ့စေချင်တာကိုပြည့်စုံအောင်ဖော်ပြတတ်ပါတယ်။ ၆။အိမ်ပြန်လာပြီဆိုတဲ့အသံကြားပြီးနောက်မှာသင့်ဆီအလောတကြီးလာတာကသူတို့ဗိုက်ဆာတာလဲမှန်ပေမယ့်သင့်ကိုလဲလွမ်းလို့ပါ။ ၇။သင့်ကြောင်ကသင့်ကိုဂရုစိုက်ပြီးမဆာစေချင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ယဉ်ကျေးစွားနဲ့ဖြည်းဖြည်းကြွက်ခုတ်တာပါ။ ၈။သူတို့ကသင်ကုတ်တာကိုခံဖို့အသင့်ပေမယ့် တခြားသူထိတာကိုအကြိုက်ပါဘူး။ ၉။သင့်အဝတ်တွေပေါ်အိပ်တာကပိုချစ်ဖို့ကောင်းလို့အဲအမွေးတွေသင်ဖယ်ဖို့ခက်တာကအရေးမကြီးတော့ပါဘူး။ ၁၀။သင်ကအရမ်းကောင်းတဲ့ခေါင်းအုံးဖြစ်ပြီးချစ်ဖို့ကောင်းလို့သင့်ပေါ်မှာအိပ်တာပါ။ ၁၁။သင့်လက်ကိုနမ်းတာကကျနိးမာရေးကြောင့်မဟုတ်ဘဲသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေပြောချင်လို့ပါ။ ၁၂။ကိုက်တာကနာပါတယ်။ဒါပေမယ့်ဒါကအချစ်စိတ်ကိုဖော်ပြတာမို့မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ၁၃။သင်ကိရိယာတွေသုံးတာကိုသူတို့တားနေရင်မဆူပါနဲ့။သင့်ကြောင်ကသင့်ကိုချစ်လို့ ဂရုစိုက်တာခံချင်တာပါ။ Writer -Min Thu (Daily Hot News ) Popular Post
knowledge / news / unusual
လေးရက်ကြာ အိမ်သာတက်ပြီး ဂင်းနစ်မှတ်တမ်း ၀င်အောင် ကြိုးစားသူ
ကမ္ဘာ့အကြာဆုံး အိမ်သာတက််သူအဖြစ် ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင်အောင် ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံက အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ ဘားဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ လေးရက်ကြာ ဆက်တိုက်၊ နာရီအားဖြင့် ၁၁၆ နာရီအကြာ တစ်ထိုင်တည်း အိမ်သာတက်ပြီး ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အော့စတန်အရပ်က ဘားဆိုင််ရဲ့ မိန်းခန််းမက အိမ်သာမှာ ထိုင်ရင်း ဂျင်မီဒီဖရန်နီက သူဟာ ရေလောင်း၊ ရေဆေးခြင်းလည်း မလုပ်ဘဲ တစ်ဆက်တည်း အိမ်သာတက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဂင်းနစ်စံချိန်မှာ အိမ်သာ အကြာဆုံးတက််သူဆိုပြီး …
ကမ္ဘာကြီးကို ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့အာဏာလက်ဝယ်ရှိသူ ( ၁၀ ) ဦး
July 15, 2019 - by Editor a
၁၀။ David Hanson မျက်မှောက်ခေတ်ကမ္ဘာမှာ စက်ရုပ်တီထွင်မှုပြိုင်ဆိုင်တာတွေကို အင်အားကြီး ဖွ့ံဖြိုးပီးနိုင်ငံတွေမှာတွေ့မြင်နေရမှာပါ။ ထိုအထဲ ဉာဏ်ရည်မြင့် စက်ရုပ်တီထွင်မှုကို ဦးဆောင်နေသူ David Hanson ကို မီးမောင်းထိုးပြချင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့နောက်ဆုံး တီထွင်မှုဖြစ်တဲ့ လူသားနီးပါးစွမ်းဆောင်နိုင်သူ Sofia ဟာထင်ရှားပါတယ်။ စတီဗင်ဟောကင်းသတိပေးခဲ့သလိုပဲ ယခုနှုန်းအတိုင်းဆက်လက်တီထွင်သွားမယ်ဆို ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ လူသားတွေအစားစက်ရုပ်တွေလွှမ်းမိုးလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ချေတော်တော်လေးများနေပါပီ။ ၉။ Vladimir Putin နြူထိ်ပ်ဖူးတပ် Missiles …
လိင်ကိစ္စ မှာယနေ့ခေတ် လူသားတွေထက်ပိုပြီး အရှက်မဲ့ခဲ့ကြတဲ့ ရှေးခေတ်တူရကီများ
၂၁ ရာစုလူသားတွေဟာ လိင်ကိစ္စ မှာ အရှက်မဲ့ကြတယ်လို့ သင်တွေးထားရင် တူရကီတွေ ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာ သိအောင် စောင့်ကြည့်ပါဦး။ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ က လက်ရေးစာမူ တစ်ခုမှာ အမည်မဖော်လိုသူ တော်ဝင်မျိုးနွယ်တစ်ဦးဟာ အော်တိုမန်တရားရုံးတော်ရဲ့ အမျိုးသား အမျိုးသမီး တွေနဲ့ သူ့ရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွန့်စားခန်းတွေကို ဖွင့်ပြရေးသားထားပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင် Sotheby’s အနုပညာကျောင်းမှာ လေလံတင်ရောင်းချထားတာရှိပါတယ်။ …
ရေခဲသေတ္တာတွေဆိုတာ အမြဲလိုလိုညစ်ပတ်နေလေ့ရှိတဲ့အရာတွေပါ ။အဓိက ညစ်ပတ်ရခြင်းအကြောင်းကတော့ မှိုစွဲခြင်းကြောင့်ပါပဲ ။ရေခဲသေတ္တာဆိုတာဟာ အမြဲတမ်းစိုစွတ်နေတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက် မှိုတွေနဲ့ဘတ်တီးရီးယားတွေပေါက်ပွားရာနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီဘတ်တီးရီးယားနဲ့မှိုတွေဟာ အထဲမှာထားတဲ့ သစ်သီးသစ်ရွက်တွေကို ကူးစက်သွားခဲ့ရင်တော့ သင့်အတွက်ပြဿနာရှိလာပါပြီ ။မှိုတက်နေတဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှာအမှန်ပါပဲ ။ အခုပြောပြမယ့် နည်းလမ်းလေးကို သုံးလိုက်ရင်တော ့အချိန်မကုန်ပဲ ရေခဲသေတ္တာထဲက မှိုတွေကိုအလွယ်ကူဆုံးရှင်းလင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ် ။သင်လိုအပ်မယ့်အရာတစ်ခုကတော့ သံပုရာသီးပါပဲ ။သံပုရာသီးကို ထက်ခြမ်းခွဲပြီး ခွက်တစ်လုံးထဲအရည်ညှစ်ထည့်ကာ …
မျက်မှန်တပ်သူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ မျက်မှန်ကိုအစင်းမထင် ၊အရောင်မလွင့် အောင် သန့်ရှင်းနည်း
July 13, 2019 - by Editor a
မျက်မှန်တပ်တဲ့သူတွေကတော့ အစင်းကြောင်းထင်နေတဲ့မျက်မှန်ဟာ ဘယ်လောက်တောင်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာကောင်းလဲဆိုတာနားလည်မှာပါ ။တွေ့ကရာဆပ်ပြာနဲ့ဆေးကြောလိုက်တာမျိုးဟာ ကိုင်းကအရောင်တွေပျက်သွားစေနိုင်သလို ၊ အဝတ်ကြမ်းတစ်ခုနဲ့မှန်ကိုပွတ်တာမျိုးဟာလည်း မျက်မှန်မှာ အစင်းကြောင်းတွေထင်သွားစေနိုင်ပါတယ် ။ မျက်မှန်ကို အသစ်အတိုင်းကြည်လင်နေစေပြီး အစင်းလည်းမထင်ရအောင် ဘယ်လိုသန့်ရှင်းရမလဲ ။အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ပန်းကန်ဆေးဆပ်ပြာရည်နဲ့ဆေးကြောခြင်းပါ ။ပန်းကန်ဆေးဆပ်ပြာရည်အနုစား နဲ့ ရေအနည်းငယ်ရောပြီးတော့ မျက်မှန်ကိုဆေးကြောပြီး မိုက်ခရိုဖိုက်ဘာစတစ်ခုနဲ့ မှန်တွေကို ပွတ်ပြီးသန့်ရှင်းပေးပါ ။ စက္ကူတစ်ရှူးတွေက အစင်းကြောင်းထင်ရခြင်းရဲ့တရားခံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝမသုံးပါနဲ့ ။နှာခေါင်းထောက်တဲ့ ရာဘာပြားလေးတွေကလည်း ဘတ်တီးရီးယားပေါက်ပွားတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက် သန့်ရှင်းဆေးကြောပေးသင့်ပါတယ် …
Apophis လို ့အမည်ပေးထားတဲ့ ဥက္ကာခဲကြီး တစ်နာရီ မိုင် ၁၅၀၀ နှုန်းနဲ ့ကမ္ဘာဆီကို ဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေ
ရှေးခေတ်တုန်းက ဥက္ကာခဲတွေ ကမ္ဘာပေါ်ကျလာတာကို နတ်ဘုရားတွေရဲ့လက်နက်တွေ ကမ္ဘာပေါ်ကို ကျရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ အခု တွေ့ရှိထားတဲ့ အကျယ်မီတာ ၃၇၀ ရှိ Apophis 99942 ကိုတော့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဂရိနတ်ဘုရားတစ်ပါးရဲ့ နာမည်ဖြစ်တဲ့ Apophis ကို အစွဲပြုပြီးပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥက္ကာခဲကြီးဟာ တစ်နာရီမိုင် ၁၅၀၀၀ နှုန်းနဲ့ ကမ္ဘာဆီကို ဦးတည်ဝင်ရောက်လာနေပြီး ၂၀၆၈ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာပေါ်ကျလာနိုင်ချေရှ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ် ။ ကမ္ဘာပေါ်ကို …